ဝါးခယ်မ : ဇမ္ဗူ ရာဇ် ရဲ. မျှော်လင့်ခြင်း
ဇမ္ဗူ ရာဇ် ရဲ. မျှော်လင့်ခြင်း
Photo from B E H S Wakhema
ဇမ္ဗူ ရာဇ် တဲ့
သူ့ကျောပြင် ပုခုံးထက် ကနေ
ဒု နဲ့ ဒေး ပါ ။
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပေါ့ နော်
ဘယ်တော့မှ အပြုံးမပျက်ခဲ့ဘူး ။
ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်တတ်ခဲ့ဘူး ။
ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး ။
ဘယ်တော့မှ မညည်းတွားရက်ခဲ့ဘူး ။
ဘွဲ့ ပညာ အစီးအပွား
ဘယ်တော့မှ မငြိုငြင်ရက်ခဲ့ဘူး ။
စဉ်းစားကြပါစို့  ။ ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 5:51 PM
Labels: မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ, အနောက်ပိုင်းကျောင်းကြီး
န၀မ ပွဲ က စကားလုံးပေါင်း ၁၅၀၀
ထိုတစ်ညလွန်သော် - ကိုနန္ဒ(ဝါးခယ်မ)